Soo-saareyaasha Modellaha Tortoise - Shiinaha Iibiyeyaasha Modellaha & Warshadaha
Qaabka taranka halbeega ee Hemann's
[Nuqul] Resin turtle model Angonoka M
Nooc Muuqaal Resini Turtle moodal Angonoka M Nooc Midab ah 10.5 * 7.5 * 7cm Qaabka Resin Model A4 Muuqaal Resini tortoise, 8 nooc, mid macquul ah oo qurxoon Qaab kasta wuxuu gacanta ku sawiran yahay dephenylpolyester midi aan sun ah lahayn, ka-hortagga u-muuqashada, biyuhu, ka hortagga, ka hortagga dhicitaan. Hordhac Laba nooc oo taxane ah oo ah miisanka 'turtle model', jilitaanka moodada, sawir quruxsan. Waxaa loo adeegsan karaa sida qurxinta qafiska afgembi ama beddelidda kunool nool ee sawir qaadista iyo muujinta. Waxay leedahay 5 commo ...
Moodhida Tartanka ee Angonoka M
Muuqaal turtle moodal Sulcata S
Nooc Tilmaameedka Tartanka taranka oo ah nooca Sulcata S Nooca midabka 10 * 6 * 5cm Model Resin Model A3 Muuqaalka Resin tortoise moodada, 8 qaab, macquul ah oo qurux badan Moodeel kasta wuxuu gacanta ku sawiran yahay midab aan sun ahayn, dheecaan ka hortag ah, biyuhu, aan difaac lahayn, anti-difaac dhicitaan. Hordhac Laba nooc oo taxane ah oo ah miisanka 'turtle model', jilitaanka moodada, sawir quruxsan. Waxaa loo adeegsan karaa sida qurxinta qafiska afgembi ama beddelidda kunool nool ee sawir qaadista iyo muujinta. Waxay leedahay 5 nooc oo caan ah ...
[Nuqul] Resin turtle model Sulcata S